ဦးပိန် အစ်ရှူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဦးပိန် အစ်ရှူး	13
Posted by ဇီဇီ on Jul 6, 2016 in Creative Writing, Cultures, Environment, History, Jobs & Careers, My Dear Diary | 13 comments
ဒီရက် ကို ကိုယ့် ဖွဘုတ်ထဲ ဥပိန် ကိစ္စ ကို ပြောနေကြလို့
တစ်ချို့ က မပြင်စေချင်..
ကိုယ် တစ်ကိုယ်စာ အတွေးး ကတော့ ဦးပိန် ဘာဖြစ်လဲ လည်း စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးး
ဘာလို့ဆို ဖိနပ်အမြင့် အမြဲစီးပြီး လမ်းလျှောက်ပျင်းတဲ့ ကိုယ် ကတော့ ဦးပိန်တံတားစပ်နား ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကလွဲရင် တံတားပေါ်ကို မရောက်ဖူးတာ။ လျှောက်လည်းး မလျှောက်ချင်ဘူးး..
Safety and risk နဲ့ ကြည့် လည်းး မလျှောက်သင့်..
လေ က အသေတိုက်တာမို့ ဝတ်ထားတာတွေ ဆံပင်တွေ ဟိုလန်ဒီဖုံးး မို့ မလျှောက်ချင်..
ဘယ်တံတားးလျှောက်လျှောက် အောက်ဖက် ရေကြည့် ရင် မူးးတတ်တာမို့ အမြင့်ကြောက် ရေကြောက် သမားး ကိုယ့် အတွက်တော့
ဥပိန်တံတားပေါ် လမ်းလျှောက်ဖို့ ဆိုတာ ရှောင်ရတဲ့ အနေအထားပါ..
အေးရော။ ဘုရားစူး မန်းလေးသူ။
ဘာမှ မမြဲတဲ့ လောကကြီးမှာ ဦးပိန်က အသစ်ဖြစ်သွားတာလည်း မခံစားရဘူးး၊
အဟောင်းအတိုင်းဆိုလည်း ဘယ်လိုမှ မနေဘူးး။
ရှေးဟောင်း ဘာညာသာရကာတွေ ပျက်စီးလို့ ခံစားသေကြေးဆို ပုဂံက နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ ဆေးသုတ်ပစ်ကတည်းက သေရမှာကိုးး
ဘာခံစားရတုန်း စဉ်းစားလိုက်တော့ …
ငါးဖယ်ကြော်ရယ် အာ့တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေရော ရှိသေးလားး ??
အဲဆိုင်တွေ မရှိတော့မှာကိုတော့ ခံစားရတယ်။ 😪😪
အဟွတ်။ ဆဲနိုင်ပါပြီ။ 😁😁😁
စကားး စပ်မိလို့ အတည်ပြောရရင်တော့…
စလုံးမှာတော့ ရာစုနှစ်နဲ့ ချီတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ…
ရှေးလက်ရာတွေ ဆိုလို့ရှိရင် အပြင်ကို ရှေးလက်ရာအတိုင်းချန်ပြီးမှ
Upgrading and Renovation လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အပြင်ကို ပုံမပျက်ချန်ရာမှာလည်း အတွင်းက အသစ်နဲ့ အပြင်က အဟောင်းပုံကို တွဲချင်သလိုတွဲဆိုပြီးထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ခညာ။
အဟောင်းအတိုင်း ပုံစံကို ပဲ Structure Strengthening ကို ဟန်မပျက်လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုတွေ အတွက် ဒီဇိုင်းတွေ ကယ်ကူလေးရှင်းတွေအတွက်တော့ အကြီးစား Construction Consultant တွေကိုအပ်ပါတယ်။
Main Contractor ကိုလည်း A1 Grade Contractor တွေမှ ပေးပါတယ်။
အဲဒီ အလုပ်ရတဲ့ Main/Sub Contractor တိုင်းက သက်သာမယ် မမှတ်ပါနဲ့။ အပတ်စဉ် Submission/Presentation/Meeting စုံညီရှင်းရတာမို့……
အစိုးရရဲ့ Historical/Conservation Building Project ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိပဲ ဝင်လို့မရပါဘူးး။
ဒီလို ပရောဂျက်မျိုးဆို Contractor မျိုးစုံပါရပါတယ်။
ရိုးရိုးဆောက်လုပ်ရေးမှာက Structural နဲ့ Architectural ပိုင်း ၂ မျိုးပဲ သုံးရတာ။
ဒါမျိုး Addition & Alteration (A&A) Project တွေကျ Specialist Contractor တွေပါ အများကြီး သုံးရတာမျိုးပါ။
၁) အပြင်က နံရံ ပတ်လည်ကို ကို ချန်ခဲ့ပြီးး
အတွင်းးက slab/beam တွေကို အကုန်လဲပစ်ရတယ်… လဲနေတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ မျက်နှစာ facade wall တွေ အတွက် ထောက်ပေးး/ကန်ပေးးထားးဖို့ Shoring/Strutting နဲ့ Soil/earth retaining က အစ အရမ်းဂရုစိုက်ရပါတယ်.. ရှေးဟောင်းး အငွေ့အသက်က အဲ့ဒီ နံရံတွေမှာကိုးး …
၂) Repairing work အနေနဲ့ကျ မျက်နှာ အုပ်ချပ် တွေ သေချာလိုက်စစ်ပြီးးမှ လုံးဝ သုံးမရတဲ့ အုတ်ကိုမှ အချပ်ချင်းး အစားးထိုးးလဲတာမျိုးးပါ.
၃) Strengthening work အတွက်ကျ အတွင်းက Structure အသစ်နဲ့ နံရံအဟောင်းးကို တွဲတဲ့နေရာ အရေးကြီးသလို
အပြင်နံရံအဟောင်းးရဲ့ ခိုင်ခံ့ မှု အတွက် အသေးစိတ်ပုံမပျက် Bar လေးတွေ လိုက်ထည့်ရတာလည်းး အင်မတန် လက်ဝင်ပါတယ်..
အုတ်နီခဲ တိုင် /တန်း ထဲကို I-Column/Beam ထည့်ဖို့ရာ ဟန်မပျက်တောက်လျှောက် Recess တစ်ခုရဖို့ (Cutting) ခွဲပြီးမှ I-Beam/Column ထည့်။ ပြီးမှ အကန့်လိုက်ပြန် အချောသပ်တာမျိုးလုပ်ရတာပါ။
အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကို အဲဒီ နည်းမျိုးနဲ့ အသေးစိတ် လက်ပေါက်ကပ်ရတာမို့ Strengthening ပိုင်း Contractor အတွက်လည်း သက်သာလှတယ် မဟုတ်။
၄) Maintaining work အတွက်ကျ လဲမပစ်နိုင်တဲ့ ကနုတ်တွေ, ကမ္ဗည်းတွေ, ကျောက်တိုင်/စာ တွေကို Project စစချင်း ကတည်း က ဟန်မဖျက်ဖြုတ်ပြီးး ထိန်းသိမ်း ထားးရတာပါ..
၅) Controlled Demolition ပိုင်းကျ မလိုတာတွေကို ဖျက်ရထုတ်ရရင် ဒီတိုင်း Hack ပစ်လို့ လုံးဝမရတာမို့ Controlled methods တွေ သုံးပေးရပါတယ်.. အလွယ်အားဖြင့် Diamond Saw cutting method လို့ ခေါ်တာပေါ့..
Vibration control ဖြစ်မှ သုံးခွင့်ပြုတာမို့ Specification နဲ့ House rule တွေကိုလည်းး အတိအကျလိုက်နာရပါသေးတယ်..
အထက်ပါ ၅ ခု က A&A project တွေမှာ မပါမဖြစ် Specialist contractor တွေ အကြောင်းးပေါ့လေ..
အလုပ် အပိုင်းလေး တစ်ခု စ ဖို့ အရေးးး Detail method statement တွေ ပုံတွေ Presentation တွေကို submit လုပ်ရ ဆွေးနွေးရ ငြင်းခုံရတာမို့ Documentation ပိုင်းလည်းး လုံးးဝ မသက်သာဘူးး..
ပုံမပျက် ပြန်ရဖို့ အချောသတ်ရတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် Main Contractor လည်း သေလို့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိုးရအလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရမှာမို့လို့ အရှုံးခံပြီး လုပ်ကြပါတယ်။
သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းထဲ အစိုးရအာဘော်ထဲမယ် ကိုယ့် ကန်ပနီနာမည်ပါ မနည်းလားး
အမြင်မှာ ရှေးဟောင်းလက်ရာမပျက်မြင်ရပေမဲ့ ခိုင်ခန့်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုမှာ လုံးဝ စိတ်ချရပါတယ်။
အာ့မိုးလေးဖြစ်စေချင်လို့ ကြုံတုန်ပြောပြတာာာ နည်းးနည်းးပွားတာများးသွားးပြီ…
kai says: ပိုက်ဆံမရှိပဲ/အတတ်ပညာနည်းပညာမရှိပဲ.. .. မွဲနေတဲ့တိုင်းပြည်က ဘယ်ကဘက်ဂျက်နဲ့ ရှေးလက်ရာတွေ ကို ရှေးလက်ရာအတိုင်းချန်ပြီးမှ အတွင်းကို…
Upgrading and Renovation လုပ်နိုင်မှာမို့လည်း..။ ဒါမျိုးလုပ်ရင်.. ပုံမှန်အသစ်လဲတာထက် ၃-၄ဆပိုကုန်တယ်..။
သစ်လုံးတွေအတိုင်း အစားထိုးမပြင်နဲ့.. မလုပ်နဲ့ပြောတဲ့သူတွေ. ပိုက်ဆံထည့်ကြစေ…။ လေကန်ဝေဖန်ပြီး.. ငွေမလာတဲ့သူများကို.. ဦးပိန်နတ် ညကျ.. သရဲခြောက်ပလေ့စေ..။
ပုံ..။ ဦးပိန်နတ်၏အဖိုး.. ကန်စောင့်နတ်ဦးဝ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: ငင့်..!!
အာ့လို တည့်တည့် မပြောရဲလို့ စောင်းးရေးးနေပါဒယ်ဆိုမှ..!!!
ဆဲချင်ရင် တဂျီးး ကို ဆဲဂျဘာာာညော်..
စလုံးမှာတော့ ၂၀၀၆-၂၀၀၉ စီးပွားကျတာကို ကာကွယ်ဖို့ ဘာအသစ်မှ မဆောက်ပဲ ရှိတဲ့ဟာတွေ upgrade ပြန်လုပ်နေကြပါတယ်ခည…!!
ပြည်တွင်း Contractors တွေ ထိုင်မနေရအောင်ပေါ့လေ…
A&A project များလေ တညားး တို့ စားးရလေပေါ့..
မင်းသားကြီး ကန်ပနီက နံပတ်(၅) က စပယ်ရှယ်လစ်မျိုးပါ..
စလုံးးမယ် အာ့မိုး ကန်ပနီ ၇ ခု မပြည့်ဘူးးး
တောတွင်းပျော် says: ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေ ပြုပြင်ထိန်းသ်ိမ်းရတာ မလွယ်တဲ့ 
အလုပ်မှန်းတော့အကြမ်းဖျင်းလောက်ပဲသိထားတာ။
ခုလိုလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ချရေးပြတော့ 
တကယ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေက ဘယ်လောက်တောင်
ဖတ်နေရတဲ့ သူတောင် ခေါင်းမူးသွားတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: ဒါ အကြမ်းရေးထားတာ။
မြစပဲရိုး says: ဒီက တစ်ချို့ ရှေးတံတား တွေ လို လူ မသွား ရ တားမြစ် ထား ပြီး ဒီ အတိုင်းအဝေး က ကြည့် ကြ။
လူသွားဖို့ လိုချင်ရင် ဘေး က အသစ် တံတား တစ်ခု ဆောက်ပေါ့။
တကယ်တော့ ဒီလို နှစ်ပေါင်းများစွာ က လက်ရာ တွေ ဆိုတာ တိုးရစ် တွေ ကို ဆွဲဆောင်ပြီး ငွေရှာပေးနေတာ ကို။
ဘယ် မောင်မင်းကြီးသား က စိတ်ရူးပေါက်ပြင်လိုက်ရတယ် မသိ။
နှမြောစရာ လို့ ထင်မိရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း ရှေးလက်ရာမပျက် ပြင်သင့်တယ်။
တဂျီးပြောသလို ကိုယ်လည်း ငွေထုတ်နိုင်တာမဟုတ်တော့ မသိခြင်ထောင် ထောင်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: It is the longest wooden bridge in the world and the tourists enjoy walking along it.
I don’t mind to renovate just the floor. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: ဘေးဘက်မှာ ပန်းချီ ပြခန်း ဆိုင်လေးတွေနဲ့ စားစရာဆိုင်တွေကိုလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
မနှစ်က ပြန်တော့ ရေစပ်မှာလည်း ကျွပ်ကျွပ်အိပ်တွေ အများကြီးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: All beautiful tour sites are destroyed by plastics. Everywhere! Damn it!
I do not understand where all entrance fees go. Especially in Bagan. I did not feel Bagan as an ancient site. :-(
Thint Aye Yeik says: ဟိုတခါ…သူကြီး ပြောဖူးတာလေးလို…
ဦးပိန်တံတား ဘေးကနေ…နောက်ထပ်တံတားတစ်စင်း ထပ်ထိုးပြီး…ဦးပိန်တံတားကို ဘေးချင်းကပ် လေ့လာလို့ရအောင် လုပ်ရင်ကော…
အဲ့လိုဆို… ဦးပိန်တံတားနဲ့…ပုံစံတူ အသစ်ဆောက်ပြီး.. တံတားအမည်ကိုလည်း ဦးပိန်တံတား(၂) သို့မှုန့် ဦးဝတံတား ဆိုပြီး..လုပ်ချလိုက် အေးရော… မပြင်လည်း… ယိုင်နဲ့နဲ့ကြီး ဖြစ်နေပြီပဲ…
.ပြင်သင့်ပါပြီလေ… .ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း.. ဦးပိန်တံတား..ဟိုဘက်ခြမ်း ကမ်းစပ်နားက…ဈေးဆိုင်တွေမှာ ထန်းရည် အတု ရောင်းနေတာတွေ…. ဈေးအဆမတန်ကြီးတဲ့ မတန်တဆမုန့်ပဲ သရေစာရောင်းတာတွေကိုပါ…
.ရော…ပြင်ချလိုက်စေချင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: မြေလှန်ကြဇို့ တနယ်ချင်း
အောင် မိုးသူ says: အလင်းဆက်ပြောတာလေးလို ကျော်လည်း စဉ်းစားမိတယ် အဲ့လိုမျိုးလေးဆို အိုင်ဒိယာကောင်းတယ်နော့်
မမချွိ says: ပြင်တာကတော့ အကုန်ပြင်သင့်တာ။